Duqa Muqdisho iyo Xildhibaan Fiqi oo mar kale gorada is-daray
Dagaalka afka ee baraha bulshada labadan mas'uul ayaa dib u soo cusboonaadey | Xuquuqda Sawirka: GO
Mudanaha ka tirsan Aqalka Hoose oo weerarka dhankiisa uu kasoo bilowday ayaa su'aal wuxuu geliyey shirarka amniga magaala madaxda looga hadlo ee uu qaban-qaabiyo maamulka C/raxmaan Cumar Cismaan [Eng Yariisow].
"Shirka amniga caasimadda iyo shirka amniga caloosha oo hal mar la isla qabtay, welina wadooyinka Halbowlayaasha MUQDISHO qaraxyadii waa ka jiraan, sababtuna waa iska muuqataa!!" ayuu yiri, isaga oo raaciyey "Ugu yaraan labada shir hala kala leexsho!"
Eng Yariisow oo muddo laba saac ah ay ku qaadatay in uu u soo jawaabo ninka ay sida weyn baraha bulshadda ugu xifaaltaman ayaa ku tilmaamay Fiqi "qaswade ku farxa qaraxyada iyo amni darirada Muqdisho".
"Waa nasiib daro ah in Xil Ahmed Moallim Fiqi uu dhibsado shirarka Sugida Amniga Caasimada sida ka muuqata fariintiisa hoose. Qaswade waa kan ku farxa Qaraxa oo dhibsada dadaalada Amniga sida Fiqi oo kale. Allaha soo hanuuniyo si uu arko horumarka Caasimada".
Bishii April ee sanadkan 2019 ayay ahayd markii labadan mas'uul uu hardan dhanka afka ah uu ku dhex-maray baraha bulshada xiligaasi oo ay isku qabteen lacagaha kasoo xarooda gobolka iyo sida loo maamulo.
Madaxweyne Farmaajo oo dhowaan la kulmay mas'uuliyiinta gobolka Banaadir ayaa ku waaniyey in ay ka fogaadan musuqmaasuqa oo la tilmaamo in uu maamulka hareeyay.
Madaxda dowladda iyo maamullada ayaa Shir uga furmaya magaalada Muqdisho...
Wiil la dhashay gabadhii isku-qarxisay xafiiska duqa Muqdisho oo la xiray
Soomaliya 24.09.2019. 17:12
Is-miidaayihii weerarkii mas'uuliyiinta lagu laayay oo la aqoonsaday
Soomaliya 25.07.2019. 08:01
Soomaaliya: Maalinta AIDS-ka oo Muqdisho laga xusay [Sawirro]
Soomaliya 02.12.2017. 00:58
Swan oo si adag u cambaareeyay weerarkii xafiiska duqa Muqdisho
Soomaliya 24.07.2019. 22:35